VAPET 1200 တဝက်အော်တိုဘူးလေမှုတ်စက်က တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၁၂၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VAPET1200
VAPET1200 bottle blowing machine withacapacity of 1200 bottles/h is being provided by Viet An with the cheapest price in the market.
VAPET 1200 တစ်နာရီလျှင် ဘူးပေါင်း ၁၂၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော ဘူးလေမှုတ်စက်ကို Viet An မှ ဈေးကွက်တွင် အချိုသာဆုံး ဈေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချနေပါသည်။
Currently, the bottled water market has almost reached its peak. Therefore, the demand for bottles of bottled water companies is extremely large. So the bottle business opportunity is opening up for business lovers. But not every location offers good quality and affordable bottle blowing machines. Knowing this, Viet An Joint Stock Company, which has more than 10 years of experience in the manufacturing, importing, and supplying industry of bottle-shell blowing machines, has brought to you the latest and quality bottle blowing machine model. best quality. Customers who are wishing to buy semi-automatic and automatic blowing machine, please contact the hotline immediately: 0949.41.41.41 for the best advice!
This article Viet An will introduce to you the semi-automatic VAPET1200 bottle blowing machine, but extremely many advantages and useful for businesses to grasp opportunities for bottle shell business or water business. Bottled water... supplied by Viet An company.
ယခုအခါမှာ ၂၀ လီတာ ရေဘူးများက ဈေးကွက်မှာ တော်တော်နေရာယူနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၂၀ လီတာ ရေဘူးထုတ်လုပ်သူများရဲ့ အကြိုက်ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၂၀ လီတာ ရေဘူး စီးပွါးရေးလမ်းစများ ပွင့်လာပါတယ်။ သို့သော်လည်း အကုန်လုံးကတော့ အရည်အသွေးကောင်းပြီး ဈေးတတ်နိုင်တဲ့ ၂၀ လီတာ ဘူးအခွံများကို လေမှုတ်ပေးသောစက်များ မပေးကြပါဘူး။ ဒါကို သိတဲ့အတွက် ဘူးလေမှုတ်စက် လောကမှာ ၁၀ နှစ်ကျော် သက်တမ်းရှိတဲ့ Viet An မှ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး ကွာလတီကောင်းတဲ့ ၂၀ လီတာ ဘူးလေမှုတ်စက်ကို ယူဆောင်လာပါတယ်။ တဝက်အော်တိုနှင့် အော်တို ဘူးမှုတ်စက်များကို ဝယ်ယူချင်သူများအနေဖြင့် ၀၉- ၄၉ ၄၁ ၄၁ ၄၁ ကို ဆက်သွယ်ပြီး အကောင်းဆုံး အကြံဥာဏ်ရယူလိုက်ပါ။
ဒီဆောင်းပါးတွင်Viet An သည် တဝက်အော်တို VAPET120-20L ဘူးလေမှုတ်စက်အကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် Viet An မှ ပေးပို့သော ဘူးခွံ၊ ရေ၊ ရေဘူး များအတွက် လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
VAPET1200 bottle blowing machine with capacity of 1200 bottles/h
VAPET1200 တစ်နာရီလျှင် ဘူးပေါင်း ၁၂၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော ဘူးလေမှုတ်စက်
Introducing Viet An Joint Stock Company, the company providing the best VAPET1200 bottle blowing machine in Vietnam
ဗီယက်နမ်တွင် အကောင်းဆုံး VAPET1200 ဘူးလေမှုတ်စက်ကို ပေးပို့နေသော Viet An အကြောင်း
Viet An General Trading Joint Stock Company, formerly known as Viet An general and commercial limited liability company, was equitized since August 2009. Viet An isacompany, enterprise specializing in manufacturing, importing, exporting, distributing bottle blowing machine, filling machine, ice making machine, water purification line and many other products with brand name VA, USApec, Vinaro No. 1 Vietnam.
With nearly 20 years of establishment and continuous development. Viet An Company has received many medals, certificates of merit, certificates of merit personally awarded by the State, the Prime Minister, the President. Some Viet An awards have been achieved such as:
Semi-automatic bottle blowing machine with capacity of 1200 bottles / hour
တစ်နာရီလျှင် ဘူးပေါင်း ၁၂၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော တဝက်အော်တို ဘူးလေမှုတ်စက်
VAPET1200 bottle blowing machine isabottle blowing machine withacapacity of 1200 bottles / h supplied by Viet An. This isasemi-automatic bottle blowing machine using the latest Italian technology in 2019 with neat advantages, the latest design, savingalot of power consumption. Assembled and completed at Viet An's factory in Vietnam with ISO 9001:2015 standards. The VAPET1200 bottle blowing machine is semi-automatic and requires 1 worker to operate.
VAPET1200 လေမှုတ်စက်က Viet An မှ ပေးပို့ထားသော တစ်နာရီလျှင် ဘူးပေါင်း ၁၂၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ဘူးလေမှုတ်စက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက အင်နာဂျီကို အလွန် ချွေတာပေးတဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် အီတလီနည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့ တဝက်အော်တို ဘူးလေမှုတ်စက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီယက်နမ်တွင်ရှိသော Viet An စက်ရုံတွင် ISO 9001:2015 စံနှုန်းအတိုင်း တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ တဝက်အော်တို စက်ဖြစ်တာကြောင့် လည်ပတ်ရန်အတွက် အလုပ်သမားတစ်ယောက် လိုအပ်ပါတယ်။
Photo of bottle blowing machine VAPET1200
The bottle blowing machine system (Must buy) VAPET1200 from Viet An includes:
Viet An မှ VAPET1200 ဘူးလေမှုတ်စက်တွင်……
၃၅၀ မီလီလီတာ ဘူးများအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 900-1200
၅၀၀ မီလီလီတာ ဘူးများအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 900-1200
၁၅၀၀ မီလီလီတာ ဘူးများအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 700-900
လေမှုတ်ခေါင်းတစ်ခု၏ အများဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 600
ပုံစံခွက် ပိတ်ပေးသော အား 80
လေမှုတ်စက် အရွယ်အစား 1500*650*1700
Heaters in bottle blowing machine system: has the effect of heating the Preform and distributing heat evenly on the surface of the Preform. Then the surface of the bottle is expanded evenly so that it can be transferred to the server department to blow out the standard bottles. Minimize the error.
ဘူးလေမှုတ်စက်တွင် ပါဝင်သော အပူပေးစက်- အကြိုပုံသွင်းခြင်းများကို အပူပေးခြင်း၊ ထိုအပေါ်သို့ အပူကို ဖြန့်ပေးခြင်း အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ ထို့နောက် ၄င်းရဲ့ မျက်နှာပြင်ကို ချဲ့ပေးပါတယ်။ သို့မှသာ ၄င်းကို လေမှုတ်ရန် ဆာဗာယူနစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှားအယွင်း နည်းစေပါတယ်။
Bottle blowing machine: Including blowing part and bottle mold part. Thanks to the compressed air of the air compressor, the Preform expanded from the machine to the heat is fed into the blower mold unit. The blower will then blow air from the high-pressure air compressor, causing the workpiece to deform intoa350 ml cylinder shell, correct in the shape of the mold. If you wish to still use this 350 ml bottle blower to blow 500ml bottles or bottles smaller than 1500 ml, you must use other blowers and molds. And you can contact Viet An for private reservation.
ဘူးလေမှုတ်စက်- လေမှုတ်ကိရိယာနဲ့ ပုံစံခွက် ပါရှိပါတယ်။ လေဖိသ်ိစက်ရဲ့ ဖိသိပ်ထားသော လေကြောင့် စက်မှ အပူသို့ တိုးချဲ့ထားသော အကြိုပုံသွင်းခြင်းကို လေမှုတ်ပေးသော ပုံစံခွက် ယူနစ်တွင် ထားပါမယ်။ လေမှုတ်ပေးသော ကိရိယာက လေကို ဖိအားမြင့် လေဖိသိပ်စက်မှ မှုတ်လိုက်ပြီး အကြိုပုံသွင်းခြင်းကို ပုံစံခွက်အတိုင်း ၃၅၀ မီလီမီတာ ဆလင်ဒါ အခွံအဖြစ် ပုံစံပြောင်းပေးပါတယ်။ ဒီဘူးလေမှုတ်စက်ကို ၁၅၀ မီလီမီတာဘူး သို့မဟုတ် ၁၅၀၀ မီလီလီတာအောက် ဘူးများအတွက် အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် ကွဲပြားတဲ့ လေမှုတ်ကိရိယာနဲ့ တံဆိပ် လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် သီးသန့်ဆွေးနွေးရန် Viet An ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
B. The auxiliary equipment ofabottle blowing machine withacapacity of 1200 bottles / h
တစ်နာရီလျှင် ဘူးပေါင်း ၁၂၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်သော ဘူးလေမှုတ်စက်၏ အကူ ပစ္စည်းများ
The high pressure compressor of the VAPET1200 bottle blowing system is responsible for generating high pressure air flow, providing high pressure air to blow out beautiful bottles.
ဖိအားမြင့် လေဖိသိပ်စက်- ဖိအားမြင့် လေစီးကြောင်း ဖန်တီးပေးတယ်။ လေမှုတ်ရန် ဖိအားမြင့်သော လေ ပေးတယ်။
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း Lít 440
Air filter: The air filter of the VAPET1200 bottle blower is installed behind the air tank (also known as the air tank). The air filter works to filter the air and clean the air before it is fed into the air dryer.
Cooling tower : In the system of bottle blowing machine, the cooling tower works to cool the molds and finished products after blowing. Because if there is no cooling tower, it will get hot after blowing it and stick to the mold. Makes it difficult for you to separate the bottle.
Above is the system of blowing machine VAPET1200 of Viet An.
အပေါ်က ဖော်ပြထားခဲ့တာက Viet An မှ VAPET1200 လေမှုတ်စက်၏ စနစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အပြင်ကနေလည်း ဝယ်ယူလို့ ရပါတယ်။ Viet An မှ မဝယ်မနေရ ဝယ်ယူရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။.
တင်ပို့ထားသော စတီး ပုံစံခွက် ၃၅၀ မီလီလီတာ 610 USD
တင်ပို့ထားသော စတီး ပုံစံခွက် ၅၀၀ မီလီလီတာ 610 USD
တင်ပို့ထားသော စတီး ပုံစံခွက် ၁၅၀၀ မီလီလီတာ 700 USD
Viet An စတီး ပုံစံခွက်က ၃၅၀ မီလီလီတာ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ 410 USD
Viet An စတီး ပုံစံခွက်က ၅၀၀ မီလီလီတာ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ 410 USD
Viet An စတီး ပုံစံခွက်က ၁၅၀၀ မီလီလီတာ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ 470 USD
Process of blowing bottle VAPET1200 provided by Viet An
Viet An မှ ပေးပို့သော ဘူးလေမှုတ်ကိရိယာ VAPET1200 ၏ လုပ်ဆောင်ပုံ နည်းလမ်း
Step 1: Place the Preform in the heater to heat the Preform, allowing the blank surface to expand evenly.
Step 2: Place the Preform of the evenly expanded bottle into the blower mold. To proceed with blowing the bottle. What shape you want the bottle to look like, it will depend on the mold you order!
The advantages that only VAPET1200 bottle blowing machine of Viet An bring
The price of bottle blowing machine is always the cheapest in the market.
The VAPET1200 bottle blowing machine has the lowest error rate! There is no machine on the Vietnamese market today that can guarantee suchalow rate of finished bottle errors.
VAPET1200 bottle blowing machine uses the latest Italian technology, so it is extremely energy-efficient. Reducing the cost of the bottle, helping you to compete very well with the market, without having to worry about price competition.
The bottle blowing machine provided by Viet An is the only machine on the market that can change the mechanism from bottle blowing to bottle blowing. This will be ordered separately according to the requirements of each customer.
The VAPET1200 bottle blowing machine is also compact and does not take up space. Make your workshop space clean, airy and beautiful.
Note when usingabottle blower VAPET1200 from Viet An
Regularly clean the VAPET1200 bottle blowing machine. To help the machine not to rust, as well as to ensure safety and hygiene for the shell of the finished bottle.
VAPET 1200 ဘူးလေမှုတ်စက်ကို ပုံမှန်သန့်ရှင်းပေးပါ။ စက်ကို သံချေးမတက်စေရန်၊ ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ ရေဘူးအခွံများရဲ့ ကျန်းမာရေး လုံခြုံမှုအတွက်ရယ် ဖြစ်ပါတယ်။
Customers who buy the bottle blowing machine VAPET1200 from Viet An will be transported and installed free of charge with 1 year machine warranty and long-term maintenance, withateam of professional technicians with high experience in the profession, we will create for customers with the best conditions for mutual benefits.
If you haveaneed foraVAPET1200 bottle blowing machine, please contact: 0949.41.41.41 for the best advice! Wishing you good health.
Viet An ရဲ့ VAPET 1200 ကို ဝယ်ယူသူများသည် အခမဲ့ပို့ဆောင် တပ်ဆင်ပေးခြင်း၊ တစ်နှစ် အာမခံချက်၊ ကာလကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းပေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုတို့ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်ပြီး အတွေ့အကြုံများသော နည်းပညာအသင်းမှ ဝယ်ယူသူများအတွက် အကောင်းဆုံး အခြေအနေကို လမ်းညွှန်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့သင်က ဘူးလေမှုတ်စက် VAPET1200 ကို ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင် ၀၉- ၄၉ ၄၁ ၄၁ ၄၁ ကို ဆက်သွယ်ပြီး အကောင်းဆုံး အကြံဥာဏ် ရယူလိုက်ပါ။ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
VAPET 1200 Bottle Blowing System Specifications (Must-Buy)
VAPET1200 ဘူးလေမှုတ်စက် ဖော်ပြချက်များ (မဝယ်မနေရ)
၅၀၀ မီလီလီတာ ဘူးများအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 800-1200
Hỏi đáp & đánh giá VAPET1200 ဘူးလေမှုတ်စက်